चियाको बारेमा यस्तो खुलासा, जसले तपाइँलाई आश्चर्यमा पार्न सक्छ !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
चियाको बारेमा यस्तो खुलासा, जसले तपाइँलाई आश्चर्यमा पार्न सक्छ !
चियाको बारेमा तपाईँले अहिले धेरै कुरा सुन्नुभयो होला र पढ्नु पनिभयो होला । तर, हालै गरिएको एक नयाँ अध्ययनका अनुसार चियालाई लिएर केहि यस्तो खुलासा भएको छ जसलाई सुनेर तपाईँ चिया पिउनु कतिको आवश्यक छ भनेर दङ्ग पर्न सक्नु हुन्छ ।
अध्ययन रिपोर्टका अनुसार दिनमा एक कप चिया पिउनाले बुढेसकालमा डिमेन्शिया रोगको खतरा हुँदैन । डिमेन्शिया एक प्रकारको रोग हो, जसमा व्यक्तिको स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ र उसले कुनै पनि कुरा धेरै समयसम्म याद राख्न सक्दैन ।
अध्ययनकर्ताहरुले गरेको दाबि अनुसार दिनमा एक कप चिया पिउनाले बुढेसकालमा बिर्सने रोगको खतरा ५० प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ । यो अध्ययन नेशनल यूनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका वैज्ञानिकहरुले गरेका छन् ।
अध्ययन गर्ने अध्ययनकर्र्ताहरुका अनुसार तपाईँ ग्रीन टी पिउनु हुन्छ वा ब्ल्याक टी त्यसले कुनै फरक पार्दैन । चियाको फाइदा तपाईँलाई कुनै पनि रुपमा प्राप्त हुन्छ । दुबै चियाले मस्तष्किमा एक समान नै प्रभाव पार्छ ।
अध्ययनकर्ताहरुले चियाको पातमा क्याटेचिन र थियाफ्लेविन नामक एन्टी–इन्फ्लेमेटरी र एन्टी–अक्सिडेन्टको गुण पाइन्छ, जसले मस्तष्किको त्यो क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ जसले स्मरणशक्ति सञ्चि रहिरहन्छ ।